Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5.1 Isticmaal jawiyo jira
Si tartiib ah, habka ugu fudud ee tijaabinta tijaabada dhijitalka ah waa inaad ku daboosho tijaabadaada dusha sare ee deegaanka. Tijaabooyinka noocan oo kale ah waxaa lagu dari karaa qadar macquul ah oo aan u baahneyn shuraako shirkad ama horumarinta barnaamijyada ballaaran.
Tusaale ahaan, Jennifer Doleac iyo Luke Stein (2013) waxay ka faa'iideysteen suuqa internetka oo la mid ah Craigslist si loo kashifo tijaabo lagu cabbiro takoorka jinsiga. Waxay xayeysiiyeen kumanaan iPod, oo si nidaamsan u bedelay astaamaha iibiyaha, waxay awoodeen inay bartaan saamaynta jinsiyadda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha. Dheeraad ah, waxay isticmaaleen miisaankooda tijaabadooda si ay u qiyaasaan marka ay saameyntu ka weynayd (heterogeestaha waxtarka daaweynta) iyo inay bixiso fikrado ku saabsan sababta ay saameyn ugu yeelan karto (qaababka).
Doleac iyo Stein ee xayaysiinta iPod ayaa kala duwanaayeen saddexda cabbir ee ugu waaweyn. Marka hore, cilmi-baarayaashu waxay kala duwan yihiin sifooyinka iibiyeyaasha, kaas oo lagu muujiyay gacanta gacanta lagu hayo iPod [caddaan, madow, caddaan leh tattoo] (sawirka 4.13). Marka labaad, waxay kala duwan yihiin qiimaha weydiistay [$ 90, $ 110, $ 130]. Saddexaad, waxay kala duwan yihiin tayada qoraalka qoraalka ah [tayada sare leh iyo tayada hooseeysa (tusaale, qaladaadka isdaba-joogga ah iyo qaladka xayeysiinta)]. Sidaa daraadeed, qorayaashu waxay sameysteen naqshad 3 \_(\_times\_) 3 \_(\_times\_) 2 kaas oo la geeyay in ka badan 300 suuqyada maxalliga ah, oo ka kala yimid magaalooyinka (tusaale, Kokomo, Indiana iyo North Platte, Nebraska) ilaa mega- magaalooyinka (tusaale, New York iyo Los Angeles).
Jaantuska 4.13: Gacmaha loo isticmaalo tijaabooyinka Doleac and Stein (2013) . iPod-yada waxaa lagu iibiyey iibiyeyaasha leh astaamo kala duwan si ay u cabbiraan takoorida suuqa onlineka. Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Doleac and Stein (2013) , sawir 1.
Dhammaan xaaladaha oo dhan, natiijada waxay ku fiicnayd iibiyeyaasha caddaanka ah ee ka iibsada iibiyeyaasha madow, iyada oo iibiyeyaasha tattooed ay leeyihiin natiijooyin dhexdhexaad ah. Tusaale ahaan, kuwa iibka cad waxay heleen dalabyo dheeraad ah waxayna leeyihiin sicir qiimihiisu sarreeyo. Marka la eego saameynta celceliska celceliska, Doleac iyo Stein ayaa ku qiyaastay hir-gelinta waxyeelada. Tusaale ahaan, hal saadaalin laga soo qaaday aragti hore ayaa ah in takooriddu ay ka yaraan doonto suuqyada halkaas oo tartan badan u dhexeeya iibsadayaasha. Iyadoo la adeegsanayo tirada suuqyada ee suuqaas iyada oo loo eegayo qadarka tartanka iibsadaha, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in iibiyeyaasha madow ay dhab ahaantii ku heleen dalabaadyo ka duwan suuqa oo ay ku jiraan tartan hoose. Dheeraad ah, marka la barbardhigo natiijooyinka xayeysiisyada leh tayo sarre leh oo tayo hoose leh, Doleac iyo Stein waxay ogaadeen in tayada tayada aysan saameyn ku yeelan faa iidada ay soo wajaheen iibiyeyaasha madow iyo tattooed. Ugu dambeyntii, ka faa'iideysiga xaqiiqda ah in xayaysiinta lagu meeleeyay in ka badan 300 suuqyada, qorayaashu waxay arkeen in iibiyeyaasha madow ay aad ugu liitay magaalooyinka leh dambiyada sare iyo kala qeybsanaanta guryaha degaanka. Midkoodna natiijooyinkaas nama siiyaan faham cad oo ku saabsan sababta dhabta ah ee iibiyeyaasha madow ay uga sii darayaan natiijooyinka, laakiin, marka la isku daro natiijooyinka daraasado kale, waxay bilaabi karaan inay ku wargeliyaan aragtiyaha ku saabsan sababaha kala soocida midab-takoorka noocyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
Tusaale kale oo muujinaya kartida cilmi-baarayaasha inay tijaabooyinka tijaabada ah ee nidaamyada hadda jira ay tahay baaritaan ay sameeyeen Arnout van de Rijt iyo asxaabteeda (2014) furaha guusha. Qeybo badan oo nolosha ah, sida muuqata dadka isku midka ah waxay ku dhamaanayaan natiijooyin aad u kala duwan. Mid ka mid ah sharaxaadda suurtagalka ah ee qaabkan ayaa ah in faa'iidooyinka yar-yar iyo faa'iidada ahaan-u-caddayntu ay ku xiri karaan oo ay kori karaan waqti dambe, habka ay cilmi-baarayaashu u yeeraan faa'iido badan . Si loo go'aamiyo in guusha ugu horeysa ee bilawga ah ay ku xirto ama ka baxdo, van de Rijt iyo jalayaashiisa (2014) dhexgeliyeen afar nidaam oo kala duwan oo ku guuleystay guusha kaqeybgalayaasha la kala doortay, kadibna waxay qiyaaseen saameynaha dambe ee guushaas ku-meel-gaar ah.
Si gaar ah, Van de Rijt iyo jalayaashiisa (1) waxay ballanqaadeen lacag si mashaariic kala duwan looga doorto Kickstarter, oo ah bogag badan oo dadweyne ah; (2) si habboon loo qiimeeyo dib u eegida si aan kala sooc lahayn ee Epinions, website-ka dib u eegida; (3) waxay abaalmarin u siisay dadka ka qaybgalay doorashadii loo yaqaan Wikipedia; iyo (4) saxiixay codsiyo aan kala sooc lahayn ee isbeddelka ah. Waxay heleen natiijooyin isku mid ah oo ku saabsan dhammaan afarta nidaam: kiis kasta, ka-qaybgalayaasha oo si aan kala sooc lahayn loo siiyay guushoodii horey u sii waday waxay ku guuleysteen guushii ka dambeysay marka loo eego dadka kale ee aan la garanayn (jaantuska 4.14). Xaqiiqda ah in qaab isku mid ah uu ka muuqday nidaamyo badan waxay kordhinayaan ansaxinta dibadda ee natiijooyinkan sababtoo ah waxay hoos u dhigeysaa fursadda qaabkani uu yahay qaab ka mid ah nidaam gaar ah.
Jaantuska 4.14: Saamaynta muddada-dheer ee ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah afar qaybood oo kala duwan. Arnout van de Rijt iyo asxaabteyaal (2014) (1) waxay ballanqaadeen lacag mashaariic kala duwan oo laga soo doorto Kickstarter, oo ah bogga dadweynaha badan; (2) si habboon loo qiimeeyo dib u eegida si aan kala sooc lahayn ee Epinions, website-ka dib u eegida; (3) waxay abaalmarin u siisay dadka ka qaybgalay doorashadii loo yaqaan Wikipedia; iyo (4) saxiixay codsiyo aan kala sooc lahayn ee isbeddelka ah. Waxaa laga soo xigtay Rijt et al. (2014) , sawirka 2.
Si wadajir ah, labadan tusaalood ayaa muujinaya in cilmi-baarayaashu ay samayn karaan tijaabooyin tijaabo ah oo dijitaal ah iyada oo aan loo baahnayn inay la shaqeeyaan shirkadaha ama dhisaan nidaamyo adag oo dijital ah. Dheeraad ah, jaantus 4.2 ayaa bixiya tusaalayaal badan oo muujinaya inta badan ee suurtogalka ah marka cilmi-baarayaasha isticmaalaan kaabayaasha nidaamyada hadda jira si loo daaweeyo iyo / ama cabiraan natiijooyinka. Tijaabooyinkaas ayaa raqiis ku ah cilmi-baarayaasha waxayna bixiyaan heer sare oo xaqiiqo ah. Laakiin waxay bixiyaan cilmi-baarayaasha xaddidan xakamaynta ka qaybgalayaasha, daaweynta, iyo natiijooyinka la qiyaasi karo. Intaa waxaa dheer, waayo tijaabooyinka ka socda hal nidaam oo kaliya, cilmi-baarayaashu waxay u baahan yihiin inay ka walwalaan in saameynta ay horseed u noqon karto firfircooni nidaamsan (sida, habka Kickstarter uu ku jiro mashaariicda ama qaabka isbeddelka ku yimid taxanaha codsiyada; eeg dastuurka ku saabsan algorithmic ee ku xusan cutubka 2). Ugu dambeyntii, marka cilmi-baarayaashu farageliyaan nidaamyada shaqaynta, su'aalaha anshaxa ee khibradda leh ayaa ka muuqda waxyeellada suurtagalka ah ee ka-qaybgalayaasha, ka-qaybgalayaasha, iyo nidaamyada. Waxaan tixgelineynaa su'aalahan asluubta ah ee faahfaahin dheeraad ah ee cutubka 6, waxaana jira wadahadal wanaagsan oo ku saabsan lifaaqa Van de Rijt et al. (2014) . Ganacsiyada ka shaqeeya nidaamka hadda jira ma ahan kuwo ku habboon mashruuc kasta, sidaas darteed cilmi-baarayaashu waxay dhistaan ​​nidaamkooda tijaabada ah, sidaan soo bandhigi lahaa soo socda.
Jadwalka 4.2: Tusaalooyinka Tijaabooyinka ee Nidaamyada jira
Saamaynta barnstars ah ee ku darsaday wabiga Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
Saameynta farriinta ka hortagga dhibaatada ee ku saabsan farriimaha cunsuriyada Munger (2016)
Saameynta habka xaraashka ah ee qiimaha iibka Lucking-Reiley (1999)
Saameynta sumcadda qiimaha ku jirta dalbashada internetka Resnick et al. (2006)
Saameynta jinsiga iibiyaha ah ee iibinta kaararka baseball ee eBay Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
Saameynta jinsiyada iibka ah ee iibinta iPods Doleac and Stein (2013)
Saameynta martida martida ee kirada Airbnb Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Saameynta deeqda ah guusha mashaariicda Kickstarter Rijt et al. (2014)
Saamaynta jinsiga iyo jinsiyadda ee kirada guryaha Hogan and Berry (2011)
Saameynta qiimaha wanaagsan ee qiimeynta mustaqbalka ee Epinions Rijt et al. (2014)
Saameynta saxiixyada ku saabsan guusha codsiyada Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014) ; Rijt et al. (2016)